10 Iindawo zokuHamba ngeXesha elingaphandle kweHlabathi kwihlabathi liphela | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Iindawo zokuHamba ngeXesha elingaphandle kweHlabathi kwihlabathi liphela
Ukwazi abantu balapha ngaphandle kwezihlwele zabakhenkethi abajonge ngaphezulu kwamagxa akho kwaye uhlasele ikhefi encinci, ezi ziNdawo zokuHamba ngeXesha leHlabathi kwihlabathi liphela zezona zilungileyo kwiholide engalibalekiyo.
1. Iindawo zokuHamba ezingekho kwiXesha: I-Ireland ngo-Okthobha
Uhombe ngegolide, umoya opholileyo, ubuhle bendalo baseIreland beWicklow Mountains, ukuhamba nje okufutshane ukusuka eDublin kwaye ufika kwindawo entle entle. Apha, nayiphi na indledlana yokunyuka intaba ikukhokelela kwiingxangxasi ezimangalisayo, iimbono zeengqungquthela, kunye nesibhakabhaka esiluhlaza okwesibhakabhaka okanye intlambo yeGlendalough kunye ne-6th century.
Uncedo olongezelelekileyo lokundwendwela i-Ireland ngaphandle kwexesha lonyaka lithuba lokonwabela ipenti yeGuinness kwindawo yokupapasha yendawo, kanye phambi komlilo ovulekileyo.
2. Italy Ngo-Epreli
Ukuntywila kwiMeditera, ukukha i-truffles, kunye nokuwa kwamahlamvu amahle, I-Itali lelona xesha lokugqibela lokuhamba lonyaka ongekhoyo ku-Epreli. Intwasahlobo lelona xesha lilungileyo lokundwendwela i-Itali njengamaqondo obushushu, ukufuma, amaxabiso, nokuncipha kwezihlwele.
Wonke umntu ufuna ukuya eholideyini kunxweme lweAmalfi, okanye phakathi kweediliya eTuscany. kunjalo, kuyabiza kwaye kuyaphithizela ehlotyeni, ixesha lokuphakama. ke, Ngo-Epreli ukuya e-Itali ngaphandle kwexesha-lelona xesha lilungileyo lokuya.
3. Iindawo zokuHamba ezingekho kwiXesha: ILoire Valley France phakathi ku-Septemba
Autumn dahlia intyatyambo, umoya omtsha wasentabeni, amagqabi ekwindla, kunye nomoya omnene ngeentsuku ezishushu, uya kufumana i-Loire Valley yexesha liphupha elipheleleyo. Ilizwe elinomtsalane laseFrance liyaziwa ngeewayini ezimhlophe, kwaye ixesha lokuvuna liqala ukuqala phakathi ku-Septemba.
ke, elona xesha lilungileyo lokuya eLoire ngoSeptemba, ukuphela kwexesha eliphezulu. Uya kuyenza kumnyhadala wegadi yaseChateau de Chaumont, umthendeleko weetamatato eChateau de la Bourdaisiere, kunye neFestivini ngomnyhadala wayo omnandi kwiFontevraud Abbey. Ukuvuna amakhowa emiqolombeni epholileyo, okanye ukunyuka intaba xa amaqondo obushushu esihla, kodwa iintsuku zisekude kunye nokukhanya kwemini okuninzi – ILoire Valley yindawo emangazayo yokuphuma ngexesha lonyaka ngoSeptemba.
4. Indawo egqibeleleyo yokuHamba ngeXesha laseJamani eJamani: EMunich NgoSeptemba-Okthobha
Ngaphandle kwegama elahlekisayo, umnyhadala webhiya omkhulu uqala ngeyoMsintsi. I-Oktoberfest sisizathu esimangalisayo sokuhamba ukuya eJamani, nakwisixeko esivela kuyo, eMunich. Ngeli xesha, uya kusifumana isixeko sisiphithiphithi kwaye iMunich ine-vibes ezinkulu.
Ngelixa oku kuthetha ukuba kunokwenzeka ukuba ujikelezwe ngabakhenkethi, nangona ingeloxesha eliphezulu. Kusafanelekile ukuya eMunich ngaphandle kwexesha lonyaka ngoSeptemba, Ngokufumana amava omlingo weOktoberfest.
5. Indawo yokuHamba ngaphandle kweXesha eTshayina: I-Shanghai ngo-Novemba
Ngabemi be 26 Isigidi sabantu, uya kuhlala ufumanekile kwisihlwele eShanghai. kunjalo, Ukuhamba-ixesha lokuya eShanghai kuthetha ukuba abakhenkethi babuyele ekhaya bevela iholide yehlobo, ke uyakube uxubana nabahlali.
Ngaphezu, Imozulu yaseShanghai ithande ukufudumala kunye nokufuma, ke ngakumbi kwesizathu sokuhamba ngaphandle kwexesha kunye nokuncoma ii-skylines zaseShanghai ngo-Novemba. Nge-Okthobha-Novemba lixesha laseShanghai xa ukufuma, yokuhlala, kwaye isihlwele siyehla. Ngale ndlela uyakuxhamla ngakumbi esixekweni esimnandi nesothusayo.
6. Iindawo zokuHamba ngeXesha elingaphandle kweHlabathi kwihlabathi liphela: Andalusia Spain NgoSeptemba
Ngomnyhadala kunye nomnyhadala phantse yonke imihla, Indawo entle nenomtsalane yeAndalusia liphupha ngoSeptemba. Ukususela kumthendeleko wokuvuna iwayini ukuya kwiintlanzi zaselwandle kunye nokushuka elunxwemeni-ngasekupheleni kukaSeptemba lelona xesha lilungileyo lokundwendwela iAndalusia.
Ngelixa u-Agasti ukuya ekuqaleni kukaSeptemba kusashushu kakhulu, Ekupheleni kukaSeptemba ungafumana ithuba lemvula, okanye elwandle enelanga-iintsuku ezigqibeleleyo, kodwa hayi ukuya kuthi ga kwinqanaba ongenakuphefumla ngalo okanye ukuhambahamba ujikeleze iidolophu ezintle zeAndalusi. ukutshaya iintsuku ezishushu. ngoko ke, I-Andalusia yindawo efanelekileyo yokuya eSpain ngasekupheleni kukaSeptemba.
7. IAlgarve iPortugal phakathi ku-Septemba
I-Algarve iyamangalisa unyaka wonke, ke akukho xesha libi lokundwendwela. Ukubhukuda nokuphumla kwiilwandle ezintle ePortugal, kwaye unxweme lweAtlantic kwaye uzivalele zonke, phakathi ku-Septemba lelona xesha lilungileyo lokundwendwela iAlgarve.
Ngelixa ihlobo lifudumele, ikwangoyena unabantu abaninzi, nasebusika, uya kudibana nabantu abaninzi abatyibilikayo ejikeleze enye yezona ndawo zibalaseleyo zokuseba kwihlabathi. ngoko ke, IAlgarve yeyona ndawo ifanelekileyo yexesha lokuphumla phakathi ku-Septemba. Uya kufumana ithuba elinqabileyo lokonwabela ii-koves ezimangalisayo, Amawa, kunye neelali zokuloba ezikunxweme.
8. Ukuhamba ngaphandle kweXesha ukuya eVienna ngoSeptemba
Ukutya kwesitalato iViennese, isiselo somdiliya, ijini, okanye nayiphi na i-cocktail oyikhethileyo zizizathu ezimangalisayo zokuya eVienna ngoSeptemba. Ngelixa ihlobo sele liphelile, kunye nayo izihlwele zabakhenkethi, kodwa iViennese ibuyile edolophini kwaye ke yiminyhadala emikhulu.
ngoko ke, IVienna yenye yezona ziphezulu 10 Iindawo zokuhamba-zexesha lokuhamba eYurophu. Unokukhetha phakathi kokuthatha uhambo lokuhamba kwizidiliya ukuya kubhiyozela kwenye yeefektha ezininzi kwaye imithendeleko eVienna ngoSeptemba kuphela kwaye kuphela kubahlali bendawo. Akukho ndlela ibhetele yokonwabela ukutya kwase-Austrian, isiko, nobuhle baseVienna kunokuzixuba nabantu bendawo.
Ngaphambi nje kokuba ubuhle bendawo butshintshe kwimibala yasekwindla kunye neencochoyi ezinxibe iimpahla ezimhlophe ngekhephu, i Swiss Alps ngumlingo ongekho-xesha. Kanye emva kokuba uninzi lwabakhenkethi lubuyile emakhaya, iiAlps zaseSwitzerland zibuyisela umlingo wazo oxolo, kuvulelwa indawo imisebenzi yangaphandle kunye neepikniki.
ngoko ke, iAlps yaseSwitzerland yindawo emangalisayo yokuhamba ngexesha lonyaka ngoSeptemba. Imozulu ishushu, isibhakabhaka esiluhlaza okwesibhakabhaka kwaye ungakonwabela ukunyuka intaba, okujikeleza, ukuphumla nokuphonononga iimbono ezintle. ke, ungakhwela nenye ezona ntaba zintle eYurophu Jungfrau.
10. Iindawo zokuHamba ngeXesha elingaphandle kweHlabathi kwihlabathi liphela: EParis ngoDisemba
Ukuhamba ecaleni kweChamps-Alyeese, okanye ngeTuileries Garden ukuya eLouvre ngaphandle kwezihlwele zabakhenkethi ngamava angaqhelekanga eParis. Ixesha laseParis lonyaka ongathandekiyo lithandana ngakumbi xa ungahambela kwesona sixeko sibakhenkethi kwihlabathi, ngaphandle kwabakhenkethi kwikona nganye. Ngelixa ihlobo libonelela ngeyona mozulu ilungileyo kunye neentsuku ezinelanga, UDisemba ngokuqinisekileyo ulungile kwiholide eParis.
Ukuya eParis ngaphandle kwexesha lonyaka ngoDisemba sisithembiso seembono ezimangalisayo. Ukwengeza, ungadubula kuninzi Iimakethe zeKrisimesi.
Apha Gcina A Isitimela, Siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo lwakho lwangexesha lonyaka kwezi ndawo zinamaphupha kwihlabathi liphela.
Ngaba uyafuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Iindawo ezili-10 zokuHamba ngeXesha leHlabathi kwihlabathi liphela" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Foff-season-travel-locations%2F- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
The French fries Best In France, Qala Finger uzibandakanya